လူးဝစ် Martinez | 09/06/2021 11:49 | ယဉျကြေးမှု, ပဲရစ်
သင်ဟာ Paris ကိုမသွားမီရုပ်ရှင်ကြည့်ဖို့စဉ်းစားနေတယ်ဆိုရင်သင်ဟာပြင်သစ်နိုင်ငံမြို့တော်ကိုသွားဖို့စီစဉ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်သည်။ သင်ခေါ်ဆိုမှုအတွက်နောင်တမရပါဘူး အလင်း၏စီးတီး ၎င်းသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အလှဆုံးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သင့်ကိုစွဲမက်စေမည့်အထိမ်းအမှတ်အဆောက်အအုံများနှင့်ဒဏ္legာရီပုံပြင်များဖြင့်ပြည့်နှက်နေသော်လည်း၎င်းသည်မမေ့နိုင်သောနေထိုင်ရန်သင်လိုအပ်သည့်အရာအားလုံးပါသည့်ခေတ်မီမြို့တစ်မြို့ဖြစ်သည်။
ဘယ်ကိစ္စမဆို, ပဲရစ်သို့မသွားမီကြည့်ရှုရန်ရုပ်ရှင် မင်းတို့ကိုးကားမယ့်အချက်ကမင်းတို့ကို Seine မြို့နဲ့မတူတဲ့ရှုထောင့်တစ်ခုကိုပေးလိမ့်မယ်။ သူတို့နှင့်အတူသင်အိမ်မှမထွက်ခွာမီသင်စူးစမ်းလေ့လာနိုင်ပြီးတည်ရှိသည်ကိုသင်ပင်မသိရှိနိုင်သည့်ထောင့်များကိုရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သည်။ သို့သော်ယခုအချိန်သည်ချဲ့ထွင်ရန်အချိန်မဟုတ်ပါ၊ နောက်ထပ်ထပ်မံမပြောဘဲငါတို့သည်ပဲရစ်သို့မသွားမီသင်ကြည့်ရှုရန်ရုပ်ရှင်များကိုသင့်အားအကြံပြုသွားပါမည်။
1 ပါရီသို့မသွားမီမြို့၏ virtual tour သို့သွားမည့်ရုပ်ရှင်
1.1 Notre Dame ၏ Hunchback
1.2 Marie Antoinette၊ ပါရီသို့မသွားမီ၎င်း၏သမိုင်းကိုလေ့လာရန်နောက်ထပ်ရုပ်ရှင်တစ်ခု
1.5 Amelie, ရုပ်ရှင်ကားများအကြားတွင် Paris သို့မသွားမီကြည့်ရှုရန်
1.6 la နှင်းဆီ en တု
1.7 Ratatouille, ကာတွန်း၏ရုပ်ရှင်ထဲတွင်ပါရီသို့မသွားခင်ကြည့်ရှုရန်
ပါရီသို့မသွားမီမြို့၏ virtual tour သို့သွားမည့်ရုပ်ရှင်
ကျွန်ုပ်တို့၏ပဲရစ်မြို့ရှိအကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်ကားများကိုလှည့်လည်ကြည့်ရှုခြင်းအားဖြင့်သင်သည်သူတို့၏သမိုင်းကြောင်းကိုလက်ရှိအခြေအနေနှင့်ပါတ်သက်ပြီးအတိတ်ကာလများသို့ခေါ်ဆောင်သွားပါလိမ့်မည်။ ကျက်သရေအပြည့်အဝသောသူတို့ကိုနေရာများ သောခရီးသွား gu ည့်လမ်းညွှန်ထဲမှာပေါ်လာပါဘူး။ ငါတို့တင်ပြသောတိပ်ခွေများနှင့်အတူသွားကြကုန်အံ့။
Notre Dame ၏ Hunchback
Notre Dame ဘုရားရှိခိုးကျောင်း
ထူးခြားသောဝတ္ထုကိုအခြေခံသည် paris ၏ကျွန်ုပ်တို့၏သမ္မတကတော် အကြီးအ ဗစ်တာဟူဂို, ရုပ်ရှင်တစ်ခုထက်ပိုအများအပြားရှိပါတယ်။ လူကြိုက်အများဆုံးဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်မှာ ၁၉၉၆ ခုနှစ်တွင် Disney မှထုတ်လုပ်သောကာတွန်းကားဖြစ်သည်။ အချစ်၊ မကျေနပ်မှုနှင့်လက်စားချေရန်ကြံစည်မှုတွင်ပါ ၀ င်သည့်ကြွယ်ဝသောခါးဇီမိုဒိုနှင့်လှပသောgကရာဇ် Esmeralda တို့၏အဖြစ်အပျက်ကိုအလယ်ခေတ်ကာလများမှကျွန်ုပ်တို့သိရှိရသည်။
ဤအရာအားလုံးကိုပဲရစ်မြို့ရှိအထင်ရှားဆုံးဘုရားရှိခိုးကျောင်းဖြစ်သည့် Notre Dame နှင့်အတူတည်ဆောက်ထားသည်။ အတိုချုပ်ပြောရရင်၊ ဖန်သားပြင်ကြီးကိုအကြိမ်ပေါင်းများစွာယူဆောင်လာခဲ့တဲ့မကောင်းတဲ့ဇာတ်ကောင်တွေမပါဘဲလှပတဲ့ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်။
သင်အမှန်တကယ်သရုပ်ဆောင်များကိုအတူဗားရှင်းကြည့်ဖို့ပိုနှစ်သက်လျှင်, ဥပမာအားဖြင့်အသံတိတ်ရှိသည် paris ၏ကျွန်ုပ်တို့၏သမ္မတကတော်, 1923 ကနေ Wallace Worsley ကညွှန်ကြားခဲ့သည်။ သူ၏စကားပြန်များမှာ Lon chaney Quasimodo နှင့် Patsy Ruth Miller တို့က Esmeralda ကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ အသံဗားရှင်းကိုသင်လိုချင်လျှင် ၁၉၅၆ တွင်ခေါင်းစဉ်တူတူရိုက်ကူးရန်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုသည် အန်သိုနီ Quinn Esmeralda အဖြစ် Hunchback နှင့် Gina Lollobrigida တို့၏အခန်းကဏ္တွင်ရှိသည်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ညွှန်ကြားချက်ပြင်သစ် Jean Delannoy ဖြစ်ခဲ့သည်။
မာရီ Antoinetteပါရီသို့မသွားမီကြည့်ရှုရန်နောက်ထပ်ရုပ်ရှင်တစ်ခု၊ ၎င်း၏သမိုင်းကိုလေ့လာရန်
၏နေမကောင်း -fated ဇနီး၏ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ် ပြင်သစ်၏လူးဝစ် XVI ၎င်းသည်မျက်နှာပြင်ကြီးကိုအကြိမ်ပေါင်းများစွာယူဆောင်လာသည်။ ၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင်ဆိုဖီယာကော့ပolaကညွှန်ကြားသောဗားရှင်းကိုသင့်အားကျွန်ုပ်တို့အဆိုတင်သွင်းသည် မာရီ Antoinette။ ဘုရင်မရဲ့ဘဝကိုအာရုံစိုက်ပေမဲ့လည်းခမ်းနားထည်ဝါတဲ့လမ်းတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ် ၁၈ ရာစုနှောင်းပိုင်းတော်လှန်ရေးပဲရစ်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိပါ, အဘယ်သူ၏အထိမ်းအမှတ်အဆောက်အ ဦး များနေဆဲများနှင့်သင်သည်သင်၏မြို့ခရီးစဉ်တွင်သူတို့ကိုမြင်နိုင်ပါလိမ့်မည်။
အဆိုပါမကျန်းမမာမင်းမျိုးအနွယ်ဝင်များ၏အခန်းကဏ္byကိုအားဖြင့်ကစားသည် Kristen dunstသူမ၏ခင်ပွန်းဘုရင်ကဂျေဆန်ရှဝါဇမန်ကိုတာဝန်ယူသည်။ Judy Davis၊ Rip Torn သို့မဟုတ် Asia Argento ကဲ့သို့သောအခြားကိန်းဂဏန်းများသည်ရုပ်ရှင်ကားတစ်ကားရရှိခဲ့သည် အကောင်းဆုံးဝတ်စုံဒီဇိုင်းအတွက်အော်စကာ.
သို့သော်၊ အကယ်၍ သင်ပိုမိုဂန္ထဝင်ရုပ်ရှင်ကိုပိုနှစ်သက်ပါက ၁၉၃၉ မှရိုက်ကူးခဲ့သောရုပ်ရှင်ကိုလည်းအကြံပြုသည် မာရီ Antoinette။ Woodbridge S. Van Dyke ကအော်စကာနှစ်ဆုရရှိခဲ့သည် စွပ်စွဲခံရသူများ၏ညစာ y ဆန်ဖရန်စစ္စကို။ စကားပြန်သည် Norma ရှီးယား သူသည်မိဖုရားအဖြစ်ကစားခဲ့ပြီး Robert Morley က Louis XVI နှင့် Tyrone Power တို့ကိုarchကရာဇ်မင်း၏ချစ်မြတ်နိုးသူ Axel von Fersen နှင့်တီးခတ်ခဲ့သည်။
ဒါ့အပြင် by အမည်ရဝတ္ထုအပေါ်အခြေခံသည် ဗစ်တာဟူဂိုသူ့အချိန်ကပါရီကိုအကောင်းဆုံးဖမ်းဆီးခဲ့သည့်စာရေးဆရာတစ် ဦး သည်ရုပ်ရှင်နှင့်ရုပ်မြင်သံကြားသို့အကြိမ်ကြိမ်ခေါ်ဆောင်ခံခဲ့ရသည်။ တစ် ဦး က hit ဂီတပင်ပြဇာတ်အပေါ်အခြေခံပြီးဖန်တီးခဲ့သည်။
သင့်ကိုဤသို့ပို့ဆောင်သောဗားရှင်းသည် ၁၉၇၈ ခုနှစ်တွင်ဂလင်းဂျော်ဒန်မှဒါရိုက်တာဖြစ်ပြီးသရုပ်ဆောင်ခဲ့သည် ရစ်ချတ်ဂျော်ဒန် Jean Valjean ရဲ့အခန်းကဏ္မှာ ကယ်ရိုလိုင်း langrishe Cosette နှင့် အန်သိုနီ Perkins Javert လိုပဲ ရုပ်ရှင်၏သင်တန်း၌ကျွန်ုပ်တို့သည်ထိုကဲ့သို့သောပါရီ Parisian သမိုင်း၏ဖြစ်စဉ်များမျက်မြင် 1830 ၏တော်လှန်ရေး ယေဘုယျအားဖြင့်ထိုအချိန်၏ Seine မြို့၏နေ့စဉ်ဘ ၀ အတွက်ဖြစ်သည်။
သို့သော် အကယ်၍ သင်ရုပ်ရှင်အဖြစ်ရွေးချယ်လိုပါက Paris သို့မသွားမီမည်သည့်အရာကိုကြည့်ရမည်ကိုကြည့်ပါ အဆိုပါဆိုးကျိုးများ အခြားမူကွဲတစ်ခုကို ၁၉၅၈ တွင်ထုတ်ပြန်နိုင်သည်။ ဤကိစ္စတွင်ဒါရိုက်တာ Jean-Paul Le Chanois နှင့်စကားပြန်များဖြစ်သည်။ ဂျင်းဂါဘင်, Martine Havet နှင့် Bernard Blier ။
တတိယရွေးချယ်မှုကတော့Josée Dayan ရဲ့ရုပ်မြင်သံကြားစက်မှာရုပ်မြင်သံကြားရိုက်ကူးတာပါ။ Jean Valjean အားကိုယ်စားပြုခဲ့သည် Gerard DepardieuCosette အားဖြင့်ကစားခဲ့သည်စဉ် Virginie ledoyen နှင့် John Malkovich အားဖြင့် Javert ။
အရင်ရုပ်ရှင်တွေကမင်းကိုသမိုင်းဝင်ပဲရစ်ပြခဲ့တယ်ဆိုရင် Moulin Rouge ဒါ့အပြင် ၁၉ ရာစုအကုန်ပိုင်းမှာလည်းမြို့ရဲ့လူနေမှုအဆင့်အတန်းကိုမြှင့်တင်ပေးတယ်။ အားလုံးအထက်, ၏အနုပညာရပ်ကွက်အတွင်း၏ Montmartreရုပ်ရှင်ကိုခေါင်းစဉ်ပေးသောကျော်ကြားသော cabaret သည်ယနေ့ထိတိုင်တည်ရှိနေသည်။
ဒီရုပ်ရှင်ကို Baz Luhrmann မှရိုက်ကူးခဲ့ပြီး ၂၀၀၁ တွင်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ Seine မြို့တော်သို့ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်သည့်အင်္ဂလိပ်စာရေးဆရာငယ်တစ် ဦး ၏ဇာတ်ကြောင်းကိုဖော်ပြခဲ့သည်။ Moulin Rouge တွင်ပန်းချီဆရာကဲ့သို့သောလူမှန်များကိုသင်တွေ့လိမ့်မည် Toulousse Lautrecသူမချစ်ခြင်းမေတ္တာ၌ကျလိမ့်မည်ဘယ်သူကိုနှင့်အတူ, ဒါပေမယ့်လည်း dancer Satine ။
၎င်းသည်သင်ရှာဖွေတွေ့ရှိရန်သင့်အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုပေးမည့်ဂီတရုပ်ရှင်ဖြစ်သည် အဆိုပါ Montmartre ရပ်ကွက်အတွင်း ပြီးတော့ပဲရစ်ကိုသွားတဲ့အခါမင်းဘာတွေမြင်ရမလဲ ဒါပေမယ့်ကျွန်ုပ်တို့ကသင့်အားအကြံဥာဏ်ပေးဖို့သင့်အားအကြံပေးသည်။ ၎င်းတွင်ကြီးမားသော hits များပါ ၀ င်သည် ပြည်ကိုအစိုးရသောမိဖုရား, Elton John o နိဗ္ဗာန်.
အဆိုပါနှစ် ဦး Mills ကကော်ဖီ
ဒီရုပ်ရှင်ကို ၂၀၀၁ ခုနှစ်မှာဖြန့်ချိခဲ့ပြီးပါရီသို့မသွားခင်မှာကြည့်ရှုရန်အတွက်ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးရန်အကြံပြုချက်များအကြားတွင်ဂန္ထဝင်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် Jean-Pierre Jeunet မှစီစဉ်ပြီးဖျော်ဖြေတင်ဆက်သောရင်ခုန်စရာဟာသဖြစ်သည် Audrey tatoo.
သူမအလုပ်လုပ်တဲ့စားပွဲထိုး၏ဖိနပ်ထဲမှာသူ့ကိုယ်သူထားတယ် အဆိုပါနှစ် ဦး Mills ကကော်ဖီ သူကအခြားသူများကိုသူတို့ကိုပျော်ရွှင်စေခြင်းငှါကူညီရန်ဆုံးဖြတ်သောအခါသူသည်မိမိအသက်တာ၌ရည်ရွယ်ချက်ရှာတွေ့။ ထိုရုပ်ရှင်သည်César Awards ဆုလေးဆုရရှိခဲ့ပြီးအော်စကာအများအပြားအတွက်လျာထားခံခဲ့ရသော်လည်း၎င်းသည်မည်သည့်အရာမျှမရရှိခဲ့ပေ။ သို့သော်ထိုထက်ကားသည်လူထုနှင့်ကြီးမားသောအောင်မြင်မှုကိုရရှိခဲ့သောချစ်စရာကောင်းသောရုပ်ရှင်ဖြစ်သည်။
ဒါဟာသိရန်လည်းစုံလင်သည် MontmartreAmelie အလုပ်လုပ်သောကဖေးရှိရာ။ သို့သော်ယခင်နှင့်မတူသည်မှာကျွန်ုပ်တို့မြင်သောရပ်ကွက်သည်လက်ရှိဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်ပဲရစ်သို့သွားလျှင်၊ Café de Los Dos Molinos တွင်လည်းသင်သောက်ကောင်းသောက်နိုင်သေးသည်။
la နှင်းဆီ en တု
အဆိုတော် Edith Piaf
ယေဘုယျအားဖြင့်ပြင်သစ်နှင့်အထူးသဖြင့်ပါရီသည်သီချင်းလောကတွင်အမှတ်အသားတစ်ခုရှိပါက၎င်းသည်ဖြစ်သည် Edith piafSeine မြို့မှာမွေးဖွားခဲ့တယ်။ ဤရုပ်ရှင်သည်မြို့၏ဆင်းရဲနွမ်းပါးသောရပ်ကွက်များရှိသူမ၏ငယ်စဉ်ကလေးဘဝမှသူမသည်ကမ္ဘာ့အောင်မြင်မှုရသည့်အချိန်အထိအဆိုတော်၏ဘဝကိုအတိအကျပြောပြသည်။
Olivier Dahan က ၂၀၀၇ ခုနှစ်မှာပြသခဲ့သည်။ သို့သော်ထိုအရာနှင့် ပတ်သက်၍ ထူးခြားမှုတစ်ခုရှိပါက၎င်းသည်အထင်ကြီးလောက်သောစွမ်းဆောင်ရည်ဖြစ်သည်။ မာရီယန် Cotillard အဆိုတော်၏အခန်းကဏ္ကို၌တည်၏။ တကယ်တော့သူကရတယ် အကောင်းဆုံးမင်းသမီးဆုအတွက်အော်စကာ များစွာသောအခြားအသိအမှတ်ပြုမှုအပြင်, သူ့စွမ်းဆောင်ရည်သည်။
သူမပါဝင်သရုပ်ဆောင်ရာတွင် Gerard Depardieu သည် Piaf ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သောဂီတလုပ်ငန်းရှင် Louis Lepléeဖြစ်သည်။ အဆိုတော်မိခင်နှင့် Jean-Pierre Martins တို့၏အခန်းကဏ္erတွင် Clotilde Courau သည် Diva သီချင်းနှင့်အချစ်ဇာတ်လမ်းတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့သောလက်ဝှေ့သမား Marcel Cerdan အဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့သည်။
သင်သိသည့်အတိုင်းပါရီသည်ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာမြင်ကွင်း၏မြင်ကွင်းဖြစ်သည် ကမ္ဘာပေါ်မှာအကောင်းဆုံးအစားအစာ။ ဤသည်ကားငါတို့ရုပ်ရှင်၏ခရီးစဉ်ကိုပဲရစ်သို့မသွားမီအဆုံးသတ်ရသောဤရုပ်ရှင်၏အခြေခံဖြစ်သည်။
Remy သည်ကြီးစွာသောစားဖိုမှူးဖြစ်လာရန်သူ၏အိပ်မက်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်အတွက် Seine မြို့သို့လာသည့်ကြွက်ဖြစ်သည်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့အဲဒါကိုမိတ်ဆက်ပေးတယ် Gusteau စားသောက်ဆိုင်, မိမိအကြီးမြတ်ရုပ်တု ထိုတွင်သူသည်ပါရီတစ်မြို့လုံးတွင်အအောင်မြင်ဆုံးဟင်းချိုကိုဖန်တီးရန်ရိုးရှင်းသောပန်းကန်ဆေးစက်နှင့်ပူးပေါင်းပါလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်အနည်းကိန်းကြွက်၏ Adventures ကိုစတင်ခဲ့သည်။
ဒါဟာဖြစ်ပါသည် ကာတွန်းကား Pixar မှထုတ်လုပ်ပြီး ၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ ဒါရိုက်တာ Jan Pinkava ဖြစ်သော်လည်းနောက်ဆုံးတွင်ထုတ်လုပ်ခဲ့သည် Brad Bird နှင့် dubbing အဘို့, က၏သရုပ်ဆောင်များကိုရှိခဲ့ပါတယ် ပတေရု O'Toole နှင့်လူရွှင်တော် Patton Oswalt။ ထို့အပြင်အခြားဆုများစွာအနက်သူသည်ရရှိခဲ့သည် အကောင်းဆုံးကာတွန်းကားများအတွက်အော်စကာ။ နောက်ဆုံးတော့အံ့သြစရာပါပဲ မြင်ကွင်း skyline ပဲရစ်ကနေ သူ၏မြင်ကွင်းတစ်ခုတွင်တွေ့မြင်နိုင်သည်။
နိဂုံးချုပ်အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အချို့သောအဆိုပြုလွှာများကိုတင်ပြထားပါသည် ပဲရစ်သို့မသွားမီကြည့်ရှုရန်ရုပ်ရှင် ပိုကောင်းတဲ့ပြင်သစ်မြို့တော်ကိုသိရန်။ သို့သော်များစွာသောအခြားသူများကိုလည်းအကြံပြုပါသည်။ ဥပမာ, CharadeAudrey Hepburn နှင့် Cary Grant တို့သည် Seine ၏ကမ်းခြေတစ်လျှောက်လမ်းလျှောက်နေကြသည်; ပဲရစ်, paris, အဘယ်သူ၏ဇာတ်ကောင်များကသူတို့ဂီတဇာတ်စင်ဖို့မွို့၌ပြဇာတ်ရုံသိမ်းပိုက်, ဒါမှမဟုတ် မင်္ဂလာပါ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုခင်မင်ရင်းနှီးမှု၏တန်ဖိုးကိုဖော်ပြသည်သာမကမြို့ကြီး၏အလုပ်ခွင်လူတန်းစားများ၏ ၀ မ်းနည်းမှုကိုလည်းဖော်ပြသည်။ ပြီးတော့သင်သွားသောအခါ City of Light ကိုလှည့်ပတ်။ ဖတ်နိုင်သည် ဤဆောင်ပါး ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြံဥာဏ်နှင့်အတူ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » မြို့ကြီးများ » ပဲရစ် » ပဲရစ်သို့မသွားမီကြည့်ရှုရန်ရုပ်ရှင်